Shiinaha Warshadda Isku-dhafka ee Ringlock iyo alaab-qeybiyeyaasha. Zhongming
Luowen Ring Lock Scaffolding waa nooc cusub oo xaraf ah, inta badan wuxuu ka kooban yahay saxanka Ring, istaandarka, ledgerka, giraangiraha iyo kaabayaasha, aad ayaa loogu soo dhaweynayaa suuqa adduunka, sababtoo ah faa'iidooyinkiisa iyo baahintiisa ballaaran.
Qaab dhismeedka 1.Simple: Qaybaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah istaandarka, buugaagta, way fududahay in la isu geeyo oo la kala furfuro, sidoo kale way fududahay keydinta, wareejinta iyo dayactirka.
2.Waajiil Dejinta: Waxaa jira 8 god oo saxanka giraanta ah, sidaa darteed buugaagta iyo xargaha ayaa geli kara saxanka giraanta jiho kasta iyo qaab kasta, markaa way ku guuleysan kartaa codsi kasta oo dhismaha ah.
3.Multi iyadoo la adeegsanayo: Sida ku cad dhismaha gaarka ah, Wareegtada Wareegtada ah ee loo yaqaan 'Ring-Lock Scaffolding' ayaa lagu soo ururin karaa hal ama laba saf oo leh cabir kala duwan, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa qalab dhismeed fara badan, sida qaab dhismeedka taageeraya, tiirka taageeraya, jir kor u qaadista qalabka, marxaladda taageeraya, iwm.
4.Haalinta Sare: Jaangooyuhu wuxuu u shaqeeyaa sixixi ah, tani waxay ka dhigaysaa isku dhejiska booska saddex-geesoodka ah, xoog sare iyo joogtaynta qaab-dhismeedka. Saxanka giraantu wuxuu ku fiican yahay xiirashada axial adkaysi u leh, wuxuuna ka dhigaa dhidibka dhuumaha kasta hal saxan, sidaa darteed waxay hagaajinaysaa 15% xoog iyo waxqabad joogto ah.
5.Waxaa dib loo isticmaalay: iskudhafyada Luowen waxaa sameeya bir bir ah oo heer sare ah, ma fududa in waxyeello loo geysto ama qaab ahaan, sidaa darteed waa loo isticmaali karaa si isdaba joog ah.
3. Qaab dhismeedka
Isku dhejinta ringlock waa nooc cusub oo iskuulada ah, kaas oo laga keenay Yurub 1980s waana wax soosaar casriyayn ah ka dib iskaballajinta koobabka. Sidoo kale waxaa looyaqaanaa nidaamka iskudhafka rosette, nidaamka iskudhafka iskutallaabta, qaab dhismeedka qaab dhismeedka, qaab dhismeedka lakabka, maxaa yeelay mabda'a aasaasiga ah ee iskudhafka waxaa sameeya shirkadda Jarmalka ee LAYHER Invented. isku dhejinta, rosettes-ka caadiga ah oo dhexroorkiisu yahay 133mm dhumucdiisuna tahay 10mm. rosette waxay leedahay 8 god, qaybta ugu weyn waa φ48 * 3.5mm iyo biibiile bir ah Q355. Buuggan cusub ee buugga leh ee quruxda badan ee isku xiraya wuxuu leeyahay shaashad isku xirta xagga hoose.
Iskeelka Iskeelka Isku-dhejiska ah ee Jack, Qaybo ka mid ah Isgoysyada Ringlock, Qaybta 'Ringlock Scaffolding Bracket', Kwikstage Qalabka Isboortiga, Culus Waajibaadka Isku-dhafka Ringlock, Iskuxidhka Birta Cuplock,